HEROES (Part III) – Mood for Movies
သူ့အကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော် ဟိုတလောက ရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ နောက်ဆုံး Jason Bourne ဇာတ်ကား Review ထဲက စာသားတစ်ချို့ကို ယူသုံးခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျား။ 2002 လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ James Bond နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပေါလာတယ်။ နာမည်ကတော့ Jason Bourne တဲ့။ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့တော့ Mediterranean ပင်လယ်ထဲမှာ မျောနေတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်။ ကျောမှာလည်း သေနတ်ကျည်ပေါက်ရာ နှစ်ခုနဲ့။ ပြဿနာက သူဟာ ဘယ်ကလာပြီး ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်မသိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့သူတစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာတာကတော့ သူဟာ CIA Operation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Treadstone လက်အောက်မှာ အလုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ CIA အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့တစ်ယောက်ခွဲထွက်သွားတဲ့ Jason Bourne တစ်ယောက်ဟာ CIA ရဲ့အရှုပ်အရှင်းတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်လာခဲ့တာ Bourne Identity (2002), Bourne Supermacy (2004), Bourne Ultimatum (2007) နဲ့ယခုဆိုရင် Jason Bourne (2016) ထိတောင်ရှိလာခဲ့ပြီလေ။ (2012 က ထွက်ခဲ့တဲ့ Bourne Legacy ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို ကျွန်တော် ထည့်မရေးခဲ့ဘူး။ စကားချပ်)
သူဟာ James Bond လို စုံထောက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။James Bond နဲ့အရာအားလုံးကွာခြားတယ်။ သူဟာ စကားနည်းသလောက် ဘယ်အရာကိုမှ အကျိုးအမြတ်မယူဘူး။ လက်တွေ့လောကနဲ့ပိုနီးစပ်တယ်။ အလွန်တော်ပေမဲ့ အသုံးမဝင်တဲ့ လူစားမျိုး။ သူဟာ သူ့ရဲ့ဖြစ်တည် အသက်ရှင် ရပ်တည်မှုကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မေးခွန်းထုတ်နေရမဲ့ သူမျိုးလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ သူဟာ အမြဲတမ်း နိုကြားနေတဲ့ သတိနဲ့နေတဲ့လူသား။ တိုက်ခိုက်မှု စွမ်းရည်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် အရွယ်အစားကို သူဂရုမစိုက်။ လူကောင်ချင်း မျှတသည်ဖြစ်စေ မမျှတသည်ဖြစ်စေ သူ့မှာ တစ်ခြားပြိုင်ဘက် ရန်သူထက် သာလွန်နေတဲ့တစ်ချက်က လက်ရှိအခြေအနေကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရည်ပဲ။ သူ့မှာ Superpowers တွေ မရှိဘူး။ သို့သော် Skills တွေတော့ ရှိတယ်။ ဒါကို ဆိုလိုချင်တာ။ ဥပမာ သူ့မှာ လတ်တလော အခြေအနေအရ လက်နတ်မရှိပေမဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ Magazine စာအုပ်တို့ဘာတို့ကိုတောင် ကောင်းစွာအသုံးချသွားပြီး ရန်သူကို ပြန်လည် ကောင်းမွန်စွာ တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ သူမျိုး။ ကျွန်တော်တို့တွေ သူ့ကို နှစ်သက်ရတဲ့ အချက်ကလည်း ဒီအချက်ပဲ။ သူဟာ ကျဉ်းတည်းကျပ်တည်း အခြေအနေတစ်ခုကနေ မည်ကဲ့သို့လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတာ Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေရဲ့အဓိကအချက်တစ်ခုပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Daniel Craig ရဲ့ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ James Bond ဇာတ်ကားတွေဟာ Jason Bourne ဇာတ်ကားတွေကို စံနမူနာ ယူခဲ့တယ်လို့တောင် ထင်မှတ်စရာ ကောင်းလှတယ်။
ရုပ်ရှင်ချစ်သူတိုင်း နှစ်သက်ကြတဲ့ ချစ်ခင်ကြတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ လောကမှာ တစ်ကယ်မရှိခဲ့ပေမဲ့ အမှန်တစ်ကယ် ရှိခဲ့သယောင်ပင် ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထင်ကာ ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့အကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ခေါင်းထဲကို အရင်ဆုံးဝင်ရောက်လာတာကတော့ chocolate ဘူးလေးကိုကိုင်ထားပြီး ဆင်ဆွယ်ရောင် suit လေးကိုဝတ်ဆင်ထားကာ ဘတ်(စ)ကားဂိတ်က ထိုင်ခုံလေးတစ်ခုမှာ ထိုင်နေတဲ့ပုံလေးပဲ။ Forrest Gump ဟာ ထိုဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖူးသူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ စွဲထင်ကျန်ရစ်နေခဲ့သလို ပရိသတ်တွေရဲ့ပြင်ပဘဝကိုပါ စိုးမိုးနိုင်လောက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ပါ။
ကျွန်တော် သူ့ကို Hero လို့ခေါ်လို့စာဖတ်သူများ အထင်မလွဲကြပါနဲ့။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူ့လောက်ဖြူစင်သောသူ၊ ရိုးသားသောသူ၊ ကူညီသောသူ ကို တစ်ခြားရုပ်ရှင်တွေထဲတွင် မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ Tom Hanks ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ အမှန်တော့ Forrest Gump ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး ထိုဇာတ်ကောင်ကို ချစ်သွားပြီး Tom Hanks ရဲ့သရုပ်ဆောင် ပီပြင်မှုူကြောင့် ကျွန်တော်ဆို Tom Hanks ကို Forrest Gump လို့ပဲ မြင်မိတော့တယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်ရုပ် စာရိတ္တနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြည့်ပြီး အပေါ်ယံခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ Forrest Gump လို လူစားမျိုးက သူ့ဘေးကလူတွေက အောင်မြင်မှုကို ချီတက်နေကြချိန်မှာ သူကတော့ အေးရာအေးကြောင်းပဲ လူတွေကို ကြင်နာသနားပြီး ကူညီစရာတွေ့တိုင်း အမြဲကူညီပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူက စေတနာနဲ့ကူညီတာကို ထိုအကူအညီလိုသူက ငါအကူအညီမလိုဘူးလို့သူ့ကိုပြန်အော်ရင်တောင် ထိုသူကို မမုန်းတီး၊ မနာကျည်းပဲ နားလည်ပေးတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့မှာ အမုန်းတရားဆိုတာ မရှိဘူး။ သူ့ရင်ထဲမှာ အချစ်တရားတွေပဲ ရှိနေတာကြောင့်သူဟာ လောကကြီးကို ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ပဲကြည့်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူတိုင်းဟာ သူ့ကိုချစ်ခင်ကြတာပဲ။
တစ်ချို့လူတွေက သူ့ကိုအနိုင်ယူချင် ယူကြလိမ့်မယ်။ အသုံးချချင် ချတတ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကတေ့ာ ထိုအရာတွေကို တွေးတောမှော မဟုတ်ဘူး။ လောကကြီးကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့အတွက် သူ့အတွက်လည်း ကောင်းကျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ လောကကြီးရဲ့တုန့်ပြန်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ လောကကြီးကို ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာပေါ်မူတည်နေတယ်ဆိုတာ ဒီဇာတ်ရုပ်က သက်သေပဲ။ အမှန်တော့ သူဟာ ထက်မြက်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ သိကြတဲ့အတိုင်း ဉာဏ်ရည်ဟာလည်း သာမာန်လူသားတွေထက်တောင် နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ စိတ်ရှည်တယ်။ သည်းခံတယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာတယ်။ ဒါတွေကြောင့်ပဲ သူအောင်မြင်တယ်။ သူ့ဘဝဟာ စုံလင်ခဲ့တယ်။ သူငယ်စဉ်က တစ်ခြားကလေးတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသလို အမေနဲ့သား နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတဲ့ဘဝလေးမှာ အဆင်ပြေအောင် နေနိုင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်တော့ University of Alabama မှာ သူကျောင်းနေခဲ့စဉ်က အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဘွဲ့ရတော့ စစ်ထဲဝင်ကာ Vietnam တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းတွေ၊ ထို့နောက်ပြန်ရောက်လာတော့ ပုဇွန်လုပ်ငန်းဖွင့်ခြင်းတွေ၊ ဒီလိုနဲ့သူ့ဘဝဟာ စုံခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အမေကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့Jenny ကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့ မပြောင်းလဲစွာ တည်ရှိနေတုန်းပဲ။
သူဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ အချစ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ကျွန်တော့်အတွက် သူဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ ထိုဇာတ်ကားကို သေချာပြန်ကြည့်ပါ။ သူမကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်ခန်းမှ မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ သူဟာ သူကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ မကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကို စောင့်ထန်းနိုင်ခဲ့သူ။ မိမိကိုယ်ကို သစ္စာရှိသူတစ်ယောက်။ ထို့အပြင် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ၊ သူ့အမေကိုရော သူ ချစ်တဲ့ Jenny ကိုရော သူပေးထားတဲ့ ဂတိတွေကို အမြဲတည်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပေပဲလေ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့တစ်နေရာမှာ သူဟာ Jenny ကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောခဲ့တော့ Jenny က Forrest ကို နင်အချစ်အကြောင်းကို မသိပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ တစ်ကယ်တော့ Forrest ဟာ အချစ်အကြောင်းကို သူများတွေထက် ပိုသိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူသိတဲ့အချစ်က သူများတွေလို အရောင်မဆိုတဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့အချစ်ပဲလေ။
ဒီဇာတ်ကားဟာ 1987 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား။ မင်းသားတွေကတော့ ထိုခေတ်က နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Kevin Costner တို့Charles Martin Smith တို့Andy García တို့Robert De Niro တို့နဲ့Sean Connery တို့ပဲဖြစ်တယ်။ Director ကတော့ Brian De Palma ပါ။ 1930 ဝန်းကျင်ခန့်လောက်တွင် တရားမဝင်သော အရက်တွေကို ဖြန့်ချီခြင်း ရောင်းဝယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေတဲ့ သူဌေးကြီး Al Capone ကို သူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့အုပ်စုငယ်လေးတစ်စုက ရပ်တန့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲ။ တရားဥပဒေနဲ့ညီမျှသော လုပ်ရပ်ကို လုပ်ခဲ့သော လူတစ်စု၊ သူတို့ရဲ့တစ်စနဲ့တစ်စ အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် သတင်းစာတွေကိ သူတို့ကို “The Untouchables” များလို့ကင်ပွန်းပေးကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ရင်ဆိုင်ရသောသူသည် ငွေကြေးအင်အားရော လူအင်အားရော publicity အင်အားပါ ကြီးမားတောင့်တင်းတဲ့ ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ခက်ခဲသည့်အတိုင်း အများစုသည် အသက်ပေးခဲ့ရသည်။ သူတို့အဆုံးတွင် အရှုံးပေးရတော့မလိုပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်သူသည် အမြဲလိုလို အောင်မြင်သူပင် ဖြစ်သည့်အတိုင်း သူတို့အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့လူစုသည် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူရဲကောင်းများပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်ရပ်ကို ကျွန်တော်လေးစားသည်။ သူတို့ရဲ့တစ်ခြားသူများနှင့် ကွဲထွက်ကာ အမှန်တရားဘက်က ရင်ဆိုင်သော သတ္တိကို လေးစားသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည်လည်း သူရဲကောင်းများလို့ခေါ်ထိုက်ကြပေသည်။
Ree ( Winter’s Bone)
ယောကျ်ားသားတွေ ကြီးစိုးသော ကမ္ဘာရိုင်းတစ်ခု။ ဒီနေရာမှာ သူမကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ ဒီ့အတွက် သူမဝမ်းမနည်း၊ ကျင့်သားရနေပြီလို့ပင် ဆိုရလောက်အောင် ဒီလောကနဲ့တော့ သူမဟာ တစ်သားတည်း ကျနေလေပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူမဟာ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ အခုမှ လူ့လောကကို စတင်ဝင်ရောက်ကာစလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားသက်တူရွယ်တူ ဆယ်ကျော်သက်တွေလို ပျော်ပါးရွှင်မြူးခွင့်တော့ သူမမှာ အခွင့်အရေးမရခဲ့။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝကြီးနဲ့နှစ်ပါးသွားဖို့အရွယ်မတိုင်ခင်ကတည်းက ပြင်ဆင်ပြီးခဲ့ဟန်ပေ။
သူမသည် သူမတို့မောင်နှမတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးပင်၊ အမေဖြစ်သူကိုလည်း အားကိုး၍မရ။ အမေဖြစ်သူက စိတ်မူမမှန်ပေ။ 16 နှစ်သမီးဆိုပေမဲ့ အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေကို သူမကပဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေခဲ့ရသည်။ အောက်က အငယ်နှစ်ကောင်ကလည်း ယောကျ်ားလေးတွေဆိုပေမဲ့ အသက်အရွယ်ငယ်လွန်းတော့ အားကိုးလို့မရနိုင်ပြန်ပေ။ အဖေဖြစ်သူကတော့ ပိုလို့တောင် ဝေးသေး။ ယခုလည်း သူမရဲ့အဖေပျောက်နေတာ ရက်ပေါင်း အတော်ကြာပြီ။ ရဲအရာရှိက သူမအဖေ တရားရုံးချိန်းကို မတက်ရောက်သောကြောင့် လာသတိပေးမှ သူမတို့အိမ်ကို ဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ အိမ်ကို မဆုံးရှံးအောင် သူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကို ရှာပုံတော်ဖွင့်ဖို့အမှောင်ကမ္ဘာထဲကို သူမတိုးဝင်လာရတော့တယ်။
ဇာတ်ကားနဲ့အတူထပ်မျှ မာကျောလွန်းတဲ့ ထို Ree Dolly ဇာတ်ကောင်ကို မင်းသမီး Jennifer Lawrence က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ပထမဆုံး Best Actress for Academy ဆုကို လျာထားခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ထိုနှစ်က Black Swan ဇာတ်ကားက Natalie Portman ကို သူမ ရှုံးခဲ့သည်။ အမှန်တစ်ကယ် ကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တာကြောင့် မကြည့်ရသေးတဲ့လူတိုင်းကို ကျွန်တော်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
သူမဟာ မိသားစုကို ချစ်တာမှန်ပေမဲ့ သူမရောက်နေတဲ့ ဘဝကိုတော့ သိပ်ကျေနပ်ဟန်မတူ၊ သူမရဲ့အိပ်မက်က စစ်သမီးအဖြစ် စစ်တပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအာသီသကို မိသားစုအတွက် တာဝန်ယူခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ကာကွယ်ခဲ့တယ်။ သူမကို ကျွန်တော်ဘာကြောင့် ယခုကဲ့သို့သူရဲကောင်း စာရင်းတွင် ထည့်ခဲ့ရသလဲဆိုရင် သူမရဲ့အထီးကျန်တဲ့ဘဝကို ပျောက်ကွယ်စေမဲ့ အချစ်ဆိုတာကို သူမမရှာဖွေခဲ့ဘူး။ သူမလိုချင်တာက ရိုးရှင်းတယ်။ အချိန်တန်ရင် ထမင်းစားပွဲပေါ်တွင်သူမရဲ့မောင်လေးတွေနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအတွက် စားစရာ ရှိနေဖို့ပဲ။ ထို အတွက်လည်း အရွယ်နဲ့မတန် ကြိုးစားခဲ့ရသလို မိမိတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသော ပိုင်ဆိုင်ရာ အိမ်ကိုပါ ဆုံးရှုံးရတော့မည်ဆိုတော့ လမ်းစပျောက်နေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို ရှာဖွေရတော့တယ်။ ထိုခရီးကြမ်းဟာ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ် အတိပင်။ သို့သော် သူမသည် သူမရဲ့မိသားစုလေးအတွက် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကမာ ္ဘလေးထဲက သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပဲလေ။
ဒီစကားလေးဟာ Spiderman ရဲ့သင်္ကေတပဲ။ မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ စွမ်းအား၊ မိမိလုပ်ဆောင်နိုင်သော စွမ်းရည် မြင့်မားလာသည့်နှင့်အမျှ ထိုနှင့်ထိုက်တန်သော တာဝန်ယူမှုလည်း ရှိရမည်ပင်။ ဒီစကားဟာ သူရဲကောင်းတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေ၊ မိသားစုဘဝတွေမှာလည်း အရေးပါတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရာထူးပိုကြီးလေလေ တာဝန်ယူရမှု ပိုများလေပါပဲ။ ထို့အတူပါပဲ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာလည်း ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့သြဇာအာဏာကြီးမားသလို သူ့ရဲ့သူ့မိသားစုအပေါ်တာဝန်ယူရမှုလည်း တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုမိုကြီးမားပါတယ်။
Spiderman ဟာ သူ့ရဲ့ဦလေးဖြစ်သူ Uncle Ben ပြောကြားခဲ့တဲ့ ထိုစကားကို လိုက်နာခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ သမိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအင်တွေဘယ်လို ရရှိလာသလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မပြောပြတော့ပါဘူး။ လူတိုင်းသိပြီးသားပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် တာဝန်ယူတဲ့နေရာမှာတော့ လူသားတိုင်း လိုက်နာ အတုယူ ကျင့်သုံးအားကျသင့်တဲ့ သူရဲကောင်းဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ စွမ်းအင်ကို သူ့ရဲ့ဘဝလက်ဆောင်ပဲလို့မြင်သလို ကျန်စာတစ်ခုလို့လည်း သူမြင်ပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါဟာ ပင့်ကူလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတာဝန်ကို ငါယူတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပဲ။ တစ်ခြားသူတွေက ယောကျ်ားကောင်းတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို တန်ဖိုးဖြတ်သလဲတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ယောကျ်ားကောင်းဆိုတာ မိမိရဲ့တာဝန်ကို မိမိယူတတ်ခြင်းပဲ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာရော လူမှုဆက်ဆံ ပတ်ဝန်းကျင် နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာပါ တာဝန်ယူတတ်တဲ့သူကိုပဲ ကျွန်တော်ဟာ ယောကျ်ားကောင်း တစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်တယ်။
လောကမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့လူငယ်တွေ မိမိလုပ်ရပ်တွေကို တာဝန်မယူချင်ကြပဲ ခေါင်းရှောင်ချင်ကြတယ်။ မှတ်ထားပါ။ မိမိလုပ်ရပ်ကို မိမိတာဝန်ယူသူသာ ယောကျ်ားပီသတဲ့သူဆိုတာ။ Spiderman ကို အတုယူသင့်တယ်လို့ကျွန်တော် အကြံပေးချင်ပါတယ်။
လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သူမျက်စိကျနေတဲ့ အိမ်နားက ကောင်မလေးကို အထင်ကြီးအောင် ကားဝယ်ဖို့အတွက် သူရတဲ့အစွမ်းနဲ့Boxing ပွဲတွေမှာ သွားကစားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူဟာ ကြီးမားတဲ့ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူသားတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ စေတနာလေး ရှိခဲ့ပေမဲ့ ကမ္ဘာဖျက်မဲ့ ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်သေးသေးလေးသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပါ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူဟာ Superheroes တွေထဲမှာ လူအချစ်အများဆုံး ဇာတ်ကောင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ လူတိုင်းဟာ Batman ကို ကြိုက်ကြပေမဲ့ Spiderman ကိုတော့ ချစ်ကြလိ့မ်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို သူဟာ သူ့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေကိုပဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမဟုတ်။ ကျန်အားလပ်တဲ့အချိန်တွေမှာတောင် မျက်စိရှေ့တွင် အကူအညီလိုအပ်တဲ့လူတိုင်းကို သူရလာဒ်ကို မမျှော်ကိုးပဲ သူကူညီတယ်။ အရမ်းမွန်မြတ်လှတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးပါ။ လူတိုင်း အတုယူ အားကျဖွယ်ကောင်းလွန်းပါတယ်။
ထို့အပြင်သူဟာ လူသားဆန်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတဲ့အတိုင်း လူဆိုးတွေအပေါ်မှာလည်း နားလည်မှုတွေထားခဲ့တယ်။ ပထမဆုံး Spideman ဇာတ်ကားတွင် Green Goblin က သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ Harry Osbourne ကို မပြောပြဖို့Spiderman ကိုတောင်းဆိုခဲ့ချိန်တွင် Spiderman သည် Green Goblin ကိုဂတိပေးခဲ့ကာ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို ထိုအကြောင်းကို ဖွင့်ဟမပြောပြခဲ့ပေ။
Spiderman ရဲ့ကျဆုံးမှုက ဘာလဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူ အသတ်ခံရမှုပဲ။ သူဟာ ဓားပြတိုက်သူကို မတားမြစ်ခဲ့။ မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်သလို နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ အောက်မှာ သူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကို ထိုဓားပြက သတ်သွားခဲ့တော့တယ်။ အကယ်၍ သူသာထို ဒုစရိုက်သမားကို ဟန့်တားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ဦးလေး အသတ်ခံရမည်မဟုတ်ပေ။ ဒီနေရာမှာတင်သူသည် အရာရာကို နားလည်လာတော့သည်။ ဒီနေရာမှာတင် Peter Parker သည် ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သော Spiderman ဖြစ်လာလေတော့သည်။
ကျွန်တော် ဒီဇာတ်ကောင် အကြောင်းပြောမယ်လို့စဉ်းစားမိတော့ ဘယ်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်ကို ပြောရင် ကောင်းမလဲလို့အရင်ဆုံးတွေးမိတယ်။ Hollywood ရဲ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် အသွင်ပုံစံအမျိုးမျိူးနဲ့သရုပ်ဆောင်ပေါင်း များစွာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မရိုးအီနိုင်သေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထိုဇာတ်ကောင်ရဲ့သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲ။ လူသားများသည် သူရဲကောင်းတွေကို အားပေးသည့် အားလျော်စွာ သမိုင်းတွင် တစ်ကယ်ရှိခဲ့သော Robin Hood ကို ရုပ်ရှင်တွေ ဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍတွေမှာ အမြဲလိုလို ပြသခဲ့သည့်ကို ယနေ့တိုင် တခဲနက် အားပေးနေကြတုန်းပင်။ ဒါဟာ သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ ဝါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပဲ။
သူဟာ မြားအတတ်ကို သူမတူအောင် ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခဲ့သူလို့ပုံပြင်တွေ ဒဏ္ဍာရီတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ကြားဖူးခဲ့ကြတယ်။ သူဟာ England နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး တောတွင်းဓားပြကြီး Robin Hood လို့လည်း သိခဲ့ရတယ်။ ဓားပြကြီးဆိုတာနဲ့လူဆိုးလို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။ ဒီနာမည်က အုပ်ချုပ်သူတွေ တပ်တဲ့နာမည်။ သူ့ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်က လူဆင်းရဲသားတွေကတော့ သူ့ကို အားကိုးရာ တစ်ဦးတည်းသော သူရဲကောင်းလို့အမည်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ လူချမ်းသာတွေဆီက ဓားပြတိုက်ပြီး လူဆင်းရဲတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်။ ထို့ကြောင့်သူဟာလည်း Captalism ကို တိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ရှေးကလူတွေထဲကတစ်ယောက်ပေါ့။ လူဆင်းရဲတွေဆီကို မတန်မဆ အလုပ်တွေခိုင်း၊ မလောက်မငတဲ့ ငွေကြေးတွေပေးကာ မြောက်မြားစွာသော စည်းစိမ်ချမ်းသာနေတဲ့ သူတွေကို သူဟာ မတရားတဲ့သူတွေလို့မြင်တယ်။ ထို့ကြောင့် သူတို့တွေဆီက မတရားသဖြင့် ရရှိထားတဲ့ စည်းစိမ်တွေကို ဓားပြတိုက်ကာ လိုအပ်နေတဲ့ လူဆင်းရဲတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှခြင်းပဲ။ သူ့လုပ်ရပ်ဟာ မှန်လား မှားလားတော့ ကျွန်တော် မဝေဖန်ချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ လူအများစုအတွက်တော့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဆိုတာ မည်ကဲ့သိုမှ ငြင်းချက်ထုတ်၍ မရနိုင်ပေ။ Sherwood တောထဲတွင် merry band လို့အမည်ရတဲ့ သူ့အပေါင်းအပါတွေနဲ့လူချမ်းသာတွေကို တိုက်ထုတ်ကာ လူဆင်းရဲတွေဘက်က ရပ်တည်ခြင်းဟာ ဟိုးရှေးခေတ်ကတည်းက Justice အတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူလို့ပြောလို့လည်း ရပြန်တယ်။
Robin Hood ကို ကျွန်တော်တို့စာတွေထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရတာက 12 ရာစုအနှောင်းပိုင်းလောက်မှာ Richard the Lionheart ကို အားပေးထောက်ခံသူလို့လည်း သိခဲ့ရတယ်။ ထိုဘုရင်ဟာ တတိယမြောက် ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးအတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို ထွက်ခွာသွားချိန်တွင် နန်းတွင်းတွင် ကျန်ရစ်ကာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ထိုဘုရင်ရဲ့ညီတော် John ကို မကြိုက်ရင် Robin Hood တစ်ယောက် တောပုန်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့Origin ကို ယခုတိုင် အငြင်းပွားနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတောင် တစ်ချို့က Robyn လို့ပေါင်းတယ်လို့ဆိုကြပြန်သေးတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနာမည် Surname ဖြစ်တဲ့ Hood ကိုတောင် တစ်ချို့က Wood ကနေလာတယ်လို့ဆိုကြသလို Hood ဝတ်လေ့ရှိတာကြောင့် Hood လို့ခေါ်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပြန်သေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ သူသေဆုံးခြင်းကို အငြင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့နာမည်နဲ့မွေးဖွားရာ Origin ကို အငြင်းပွားနေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ Robin Hood သည် သမိုင်းတွင် လူနည်းစုထက် လူများစုဘက်က ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့သော သူရဲကောင်းတစ်ဦးပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။ (ရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် သူ့အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ယနေ့အထိ 18 ကားတိတိ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသခဲ့ကာ Television series တွေအနေနဲ့ကတော့ မရေမတွက်နိုင်အောင်ကိုပင် များပြားလှပေသည်။)
ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကောင်ကို Villains ထဲမှာလည်း ထည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ယခုလည်း Heroes စာရင်းထဲမှာလည်း ပြန်ထည့်ပြန်ပြီ။ ဟုတ်တယ်။ ဒီဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်တည်း အကောင်းဆုံး လူဆိုးရော အကောင်းဆုံး သူရဲကောင်းဆုပါ ရသင့်သူလေ။ သူလို့ပြောရအောင်လည်း သူက လူမဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထားပါ။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်သူ့ကို လူဆိုးစာရင်းကနေ လူကောင်းစာရင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သလဲဆိုရင် ပထမဆုံး Terminator ဇာတ်ကားမှာ သူဟာ အကောင်းဆုံး လူဆိုးဖြစ်ခဲ့သလို ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကား The Judgement Day ဇာတ်ကားတွင်တော့ သူဟာ အကောင်းဆုံး သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူ့ဇာတ်ကောင်အကြောင်းကို Villains ထဲတွင် တစ်စိပ်တစ်ပိုင်း ရေးသားခဲ့ဖူးပြီဖြစ်သောကြောင့် သိပ်အများအစားတော့ ထပ်မရေးချင်တော့။ သူ့ရဲ့Heroic ဆန်တဲ့အကြောင်းလေးပဲ ရေးချင်မိတယ်။ The Terminator ဇာတ်ကားတွင် T-800 သည် ပျက်ဆီးသွားခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့လက်နဲ့CPU ကတော့ မပျက်ဆီးခဲ့သေးပေ။ ပထမဇာတ်ကားတွင် T-800 ကို Skynet က စေလွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားတွင်တော့ထို T-800 ကို John Connor ဦးဆောင်တဲ့ Resistance က အတိတ်ကို စေလွှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ လူကောင်းအဖြစ် ဇာတ်ကားထဲမှာ သတ်မှတ်ခံရတာပဲ။
ထိုဇာတ်ကားထဲတွင် ငယ်ရွယ်တဲ့ John Corner နဲ့ခင်မင်ခဲ့ပြီး "Hasta la vista, baby" လို့ပြောခဲ့တဲ့ အခန်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ထိုဇာတ်ကောင်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို အလေးသာစေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဒီဇာတ်ကောင်ကို နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ The Judgement Day ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ဆုံးခန်းပဲ။ သူ့ရဲ့CPU ရှိနေသေးသ၍ သူဟာ လူသားတွေအတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သူယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူကိုယ်တိုင် အရည်ပျော်နေတဲ့ သံရည်ပူတွေထဲကို ဆင်းသွားခဲ့တယ်။ လူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ သူလည်းပါဝင်သလို သူ့ရဲ့သူရဲကောင်းဆန်ဆန် စတေးမှုတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့တာပေ့ါ။ သံရည်ပူတွေထဲကို ဆင်းသက်သွားတဲ့အထိ သူ့မှာ လက်မလေးထောင်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်းအောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူပေါ့။ ဒါတောင် သူကပြောခဲ့သေးတယ်။ သူ့လက်သုံးစကားလေ။ ငါပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့။ တစ်ကယ်လည်း သူပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ပေးထားတဲ့ အချိန်ကာလ 24 နာရီအတွင်း သူသည် စက်ရုပ်6ရုပ်ကို သတ်ဖြတ်ရတော့မည်။ စက်ရုပ်လို့တော့ မခေါ်ပါရစေနဲ့ဗျာ။ ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း Replicant လို့ခေါ်ပါရစေ။ ထို Replicants တွေဆိုတာက လူသားတွေ လုပ်စရာတွေကို အစားထိုး လုပ်ဆောင်ပေးလာရတဲ့ လူသားအစားထိုး စက်ရုပ်တွေ။ သို့သော် သူတို့နဲ့လူသားတွေနဲ့မတူညီတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ သူတို့ရဲ့Life Expectancy က လူသားတွေလို ကြာကြာအသက်ရှင်ခွင့် မရှိပဲ တစ်ယောက်ကို4နှစ်စီပဲ ရကြပါတယ်။
Rick Deckard က ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်လိုက်။ ဒါပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်က ရှုပ်ထွေးတဲ့ဇာတ်ကောင်၊ ကြည့်ရတာတော့ ဇာတ်လိုက် လူကောင်းဆိုပေမဲ့ သူ လုပ်ရမဲ့ တာဝန်က စောစောကပြောထားသည့်အတိုင်း မိမိအသက် (သက်တမ်းကို တိုးဖို့) ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုန်ကန်ရန် ပြန်ရောက်လာကြတဲ့ Replicants6ယောက်ကို သတ်ရဖို့ပဲ။ သူဟာ ထို Replicants တွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်တွေဟာ တုန်ယင်ကောင်း တုန်ယင်နေပေလိမ့်မယ်။ သို့သော် အဆုံးသတ်တွင်တော့ သူအောင်မြင်အောင် သတ်ဖြတ်နိုင်တယ်။ သူဟာ လူစွမ်းကောင်း မဆန်သော သူတစ်ယောက်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အလုပ်ကိုတော့ သူလုပ်မယ်။ အပေါ်ယံကြည့်ပါက သူသည်လည်း အထီးကျန်သော လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ စိတ်အတွင်းမှာတော့ သူလည်း နက်နဲသည့်ဟန် ပေါ်လွင်ခဲ့သည်။ Rachael ဆိုတဲ့ Replicant ကို သူနှစ်သက်ခဲ့သလို သူကိုယ်တိုင်လည်း Replicant ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ Replicants တွေအပေါ် သူထားတဲ့ သဘောထားကတော့ ပြတ်တယ်။
စက်တွေဆိုတဲ့အတိုင်း ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးရှိမယ်။ ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုထားချက်ဟာ ဆိုးကျိူးတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ နှိမ်နင်းရမှာ သူ့တာဝန်ဖြစ်လာပုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ကြာမြင့်ချိန်တွေဟာ အဆုံးနား ရောက်လာတာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့ထိုအမြင်တွေလည်း ပြောင်းလဲလာပါတော့တယ်။
Deckard သည် သူကိုယ်တိုင် Replicant တစ်ယောက်အဖြစ် သံသယတွေ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ မျိုးချစ်စိတ်တွေ ဘာတွေ အစရှိတဲ့ Cliché တွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကာ သူ့တာဝန်ကို ပြီးဆုံးကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ တစ်ကယ့်တော့ သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ Replicants တွေထက်တောင် စက်ရုပ်ပိုဆန်နေခဲ့တယ်။
နာမည်အပြည့်အစုံက Thomas Edward Lawrence ဖြစ်ပြီး 16 August 1888 နေ့တွင် Wales နယ်က Tremadog ဆိုတဲ့ ကျေးရွာလေးမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ဒီဘက်ခေတ်က လူတွေတော့ သိပ်သိကြမယ်မထင်ဘူး။ သူသည်လည်း ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်ဆိုပေမဲ့ အပြင်မှာအမှန်တစ်ကယ် ရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။ Director ကြီး David Lean ရိုက်ကူးပြီး မင်းသား Peter O’ Toole က သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ထို Lawrence of Arabia ဇာတ်ကားကြီးကို ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က ကြည့်ခဲ့ရသည့်တိုင် ယခုထိလည်း သတိရတိုင်း ပြန်ကြည့်နေဆဲပါ။ Classic ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီဇာတ်ကောင်ကိုလည်း ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ သူရဲကောင်းစာရင်းထဲတွင် ထည့်ခဲ့လိုက်တယ်။
သူ့ကိုစနှစ်သက်မိတဲ့အရာတစ်ခုက သူ့ရဲ့Philosophy ပဲ။ သူဟာ British စစ်တပ်က အရာရှိစစ်ဗိုလ်လည်း ဖြစ်သလို ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ရေးသမားဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။ ထို့အပြင် ရံဖန်ရံခါသူက စာလည်းရေးလေ့ရှိတယ်။
“The trick, William Potter… is not minding that it hurts.”
ဆိုတဲ့ အဖြေမှာတင် ကျွန်တော်သူ့ကိုလေးစားခဲ့တယ်။ သူဟာ မီးစံလေးကို လက်နဲ့ဖိပြီး ငြိမ်းပြလေ့ရှိတယ်။ ထို Arabia က သူတို့တပ်ကို ရောက်လာတဲ့ Willaim Potter က သူ့ကိုလျှို့ဝှက်ချက်ကို မေးတယ်။ အမှန်တော့ သူအခုလို မီးကို ကိုင်ရဲပြီး ငြိမ်းပြတာ ဘာလျှို့ဝှက်ချက်တွေမှ မရှိခဲ့ဘူး။ နာကျင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုပဲ မထားခဲ့တာဟာ Trick ပဲလို့သူပြန်ဖြေခဲ့တာပေါ့။
သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကတော့ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးထဲမှာတုန်းက Ottoman Empire ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ Arab တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲကြီးမှာ Prince Feisal ဦးဆောင်တဲ့ Arabs တော်လှန်ရေးသမားတွေဘက်က တိုက်ပေးခဲ့တာက အထင်ကရဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲ။ သူဟာ စာပေနယ်ပယ်မှာပါ ကျွမ်းကျင်ရုံသာမက စစ်ရေးစစ်ရာဘက်မှာလည်း တော်တဲ့သူတစ်ယောက်ပေ့ါ။ သူဟာ စစ်ကြီးပြီးတော့ အတန်ကြာအောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ 1935 ခုနှစ်မှာ သူစစ်တပ်က ထွက်ခဲ့တယ်။ သူစစ်တပ်က ထွက်ပြီး2လကြာတဲ့အခါ Motorcycle accident တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ဆေးရုံတင်ပြီး6ရက်အကြာ 19 May 1935 နေ့ သူ့အသက် 46 နှစ်တွင် သေဆုံးခဲ့ပါတော့တယ်။
Bruce Willis ကို ပရိသတ်က အရင်တုန်းက Moonlighting series နဲ့လူတွေသိချင်သိခဲ့ကြမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဘဝကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တာကတော့ 1988 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Die Hard ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြောင့်ပါပဲ။ သူဟာ ထိုဇာတ်ကားနဲ့အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဘယ်ကားပဲ ရိုက်ရိုက် သူ့ကို Die Hard မင်းသား John McClane လို့ပဲ လူတွေမြင်တော့တယ်။ John McClane ဆိုတဲ့သူက New York မြို့ရဲ့ရဲအရာရှိတစ်ဦး။ အရာရှိလို့ဆိုလိုက်လို့Neck-tie တွေဘာတွေ suit တွေဘာတွေ ဝတ်ပြီး တစ်ခမ်းတစ်နားနေတတ်မဲ့သူလို့မထင်လိုက်နဲ့။လုံးလုံးကို မှားသွားမယ်။ တစ်ကားလုံးကို စွပ်ကျယ်တစ်ထည်တည်းနဲ့တောင် ပြီးချင်ပြီးသွားမဲ့ဇာတ်ကောင်မျိုး။ ထိုစွပ်ကျယ်ကလည်း ဖုန်တွေ သဲတွေ ချွေးတွေ သွေးတွေနဲ့ပေကျံပြီး ညစ်ပစ်ချင်တောင် ညစ်ပတ်နေသေးတယ်။
သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့အလုပ်က Los Angeles မြို့ရဲ့Nakatomi Plaza မှာ Christmas အကြို Party ပွဲကျင်းပတော့ သူပါလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ Hans Gruber ဆိုတဲ့ အနောက် German အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုက ထို Plaza ကြီးကိုဝင်စီးပါလေရော။ သူတို့က ဒေါ်လာငွေ သန်းပေါင်း 640 ကို တောင်းဖို့ထို Plaza ထဲကလူတွေကို ဓားစာခံတွေအဖြစ် ဖမ်းထားတော့ ကံကောင်းပြီး လွတ်မြောက်နေတဲ့ John McClane တို့အဖို့မိန်းမဖြစ်သူကိုရော မိန်းမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေတွေကိုပါ ကယ်တင်ဖို့တစ်ကိုယ်တော် စွန့်စားခန်းကြီး စတင်လာပေတော့တာပေါ့ဗျာ။
တစ်ဖွဲ့လုံးကို တစ်ယောက်တည်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် သူရင်ဆိုင်ရတဲ့ လူဆိုးက သာမာန်လူဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဉာဏ်ရည်မှာ အလွန်သာတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို သူရင်ဆိုင်ရတာ။ (လူဆိုးဖြစသူ Hans Gruber အကြောင်းကို Villans album တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။) Hans Gruber က သူ့ကိုမင်းဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ သူဖြေတဲ့ အဖြေက တစ်ကယ်ကို ရယ်စရာကောင်းတဲ့အပြင် အမှန်လည်း ဖြစ်နေပြန်တယ်။
“Justafly in the ointment, Hans. The monkey in the wrench. The pain in the ass.” တဲ့။
သူဟာ သူရင်ဆိုင်ရတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကိုသာ မက၊ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လူဆိုးတွေကိုပါ ပျက်ရည်ပြုတတ်တယ်။ ဒါဟာ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်တဲ့အချက်ပဲ။ တစ်ခြားသူကို အထင်သေးတာထက် သူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သူယုံကြည်တဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမဆို မမှုဘူးဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်တဲ့ သူရဲကောင်းပေါ့။ သူ့ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေဟာ တစ်ညတာအချိန် (သို့မဟုတ်) တစ်ရက်တာအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ ဖြစ်ခဲ့တာတွေချည်းပဲ။ သင်ဟာ သူ့ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကို ကြည့်ပြီး ရင်ဖိုနေချိန်မှာ သူပြန်နောက်တဲ့ စကားတွေကို ကြားရတဲ့အခါ သင်ဟာ ရုတ်တရက် ထရယ်မိလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့သရော်မှုဟာ ဘယ်လောက်ထိ အားပြင်းပြီး ထိရောက်သလဲဆိုရင် Hans Gruber က
လို့သူပြန်ဖြေလိုက်တော့ ပရိသတ်အကုန်လုံးဟာ ပြုံးမိသွားကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဆို အခုရေးနေရင်းနဲ့တောင် ပြုံးမိပါတယ်။